Akụkọ - Understandghọta Differentdị Akpịrịkpa Dị Iche
Leezọ bụ isi
Ya mere, gịnị bụ akwa ajị anụ? A na-eji ajị anụ ajị anụ, wee ma ọ dịkarịa ala otu akụkụ na-ehichapụ iji mepụta eriri ma mepụta ụra (elu elu) maka mmetụta dị nro, nke gbakwunyere. Maka ajị ajị ajị anụ na ọsụsọ, n'ozuzu n'ime uwe ahụ ka a na-ehicha iji nwee mmetụta dị ọkụ ma dị nro na akpụkpọ ahụ. Uwe nwere akụkụ abụọ gbakwunyere agbasara ka ajị ajị anụ na-ehicha n'akụkụ abụọ.
Enwere ike iji ajị anụ dị iche iche dị iche iche. Sweatshirts na sweatpants na-ejikarị ngwakọta owu / polyester, ebe jaket na ajị anụ na-abụkarị 100 percent polyester. Enwere anụ ụlọ na ihu igwe na-esi na ihe eji emegharị ihe. Na njedebe, ọ bụ akwa a kpara nke ọma nke na-eme ajị anụ karịa ihe eji eme ya.
Ofdị ajị anụ
Na mgbakwunye na ịme site na ihe dị iche iche, akwa "ajị anụ" na-abịa n'ụdị nke ọkpụrụkpụ na plushness. Ka ị na-azụ ahịa maka uwe ajị anụ, ị ga-ahụ ọtụtụ ụdị ajị anụ. Lee ụfọdụ ụdị ewu ewu ndị a na-ewu ewu:
Owu, polyester na owu polyester gwakọtara ajị anụ. A na-ejikarị ajị anụ eji ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị, ajị anụ sitere na owu ma ọ bụ ngwakọta owu nwere ebe dị mma na mpụga.
Microfleece. Microfleece bụ ajị anụ ihu abụọ nke dị nro ma dị nro. Ebe ọ bụ na ọ dị fechaa ma na-arụ ọrụ dị mma nke ịmịpụ mmiri si n'ahụ, microfleece bụ nhọrọ a ma ama maka uwe arụmọrụ.
French terry ajị anụ. A na-agbajikwa ajị anụ French n'akụkụ abụọ, yabụ enweghị ụyọkọ na-acha ọcha nke ọtụtụ agba. Ọ dị gịrịgịrị ma na-anọdụ ala karịa ebe ọzọ.
Velvet ajị anụ. Velvet ajị anụ nwere ọdịdị na-egbu maramara. Ọ na-ewu ewu n'etiti ụdị hip.